တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီး ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ လိုက်ပါလာသည့် မန်းရွှေစက်တော? - Yangon Media Group
မင်းဘူး၊ မတ် ၁၆
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲဖြေဆိုပြီး ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ လိုက်ပါလာသည့် မန်းရွှေစက်တော်ဘုရားဖူး ယာဉ်တစ်စီးဘရိတ်ပေါက်ကာ တိမ်းမှောက်မှုဖြစ်ပွားရာမှ လူ ၁၉ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း စကုမြို့ နယ် နယ်မြေရဲစခန်းမှ သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ယာဉ်မောင်း အေးနိုင်(၄၆)နှစ် မောင်းနှင်ပြီး သီးကုန်း ကျေးရွာမှ ရွှေစက်တော်သို့ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲဖြေဆိုပြီး ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ အမျိုးသားကိုးဦးနှင့် အမျိုးသမီး ၁၁ ဦး စုစုပေါင်း ၂ဝ လိုက်ပါလာသော ကင်တာယာဉ် အမှတ် MDY/—- သည် မတ် ၁၆ ရက် နံနက် ၈ နာရီ ၁၅ မိနစ်က ရွှေစက်တော်ဘုရားသွားသည့် သုံးမိုင်လမ်း လှေတင် တံတားအနောက်ဘက်အရောက်တွင် ဘရိတ်ပေါက်ကာ တိမ်း မှောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း စကုမြို့ နယ် နယ်မြေရဲစခန်းမှ သိရသည်။
အဆိုပါယာဉ်တိမ်းမှောက်မှု ကြောင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအနက် (စိုးရိမ်ရ)လူနာနှစ်ဦး ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာ(မစိုးရိမ်ရ)ရရှိသူ ၁၇ ဦး ပေါင်း ၁၉ ဦးအား မင်းဘူး ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ဆေးကုသနေ ကြောင်း စကုနယ်မြေရဲစခန်းမှသိရသည်။ ယင်းဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ယာဉ်မောင်း အေးနိုင်အား စကု မြို့နယ်ရဲစခန်းတွင် (ပ)၁၆/၂ဝ၁၈၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၂၇၉/၃၃၇/ ၃၃၈ ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း သိရသည်။
ကျေးလက်လမ်းများနှင့် ရေလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အဆင်ပြေစေရန် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွ
(၅၉)ကြိမ်မြောက် မဟာဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနားကျင်းပ၊ ဘွဲ့တံဆိပ်တော်များ ရရှိခဲ့သော သံဃာတော်မျ
မြောက်ကိုရီးယား ဖျက်အားပြင်း လက်နက်များ ဖျက်သိမ်းရန် အမေရိကန်နှင့် ဂျပန်တို့ အဆုံးစွန်ထိ ??
မုံရွာမြို့ ကျောက္ကာလမ်းမကြီးတွင် ခွေးဘီးလူးကားတစ်စီးမှ ဆိုင်ကယ်သုံးစီးကို ဆင့်ကဲဝင်တိုက??
နီပေါ၊ အိန္ဒိယ၊ မြန်မာနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံများသို့ ဖြတ်ကျော်စက်ဘီးစီးနင်းသည့် ကမ္ဘာလှည့်ခရီ?
လက်ပံတန်း ကျောင်းသားသပိတ် စွပ်စွဲခံများဘက်မှ အမှုလိုက်ပေးသူနှင့် ဝန်းရံသူတို့ကို တရားစွဲဆ?